Global Voices teny Malagasy » Serbia : Voasivana Hatramin’ny Fahatsiarovana Ny Maty Avoaka Anaty Gazety · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Febroary 2018 2:54 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Serbia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, GV Mpisolovava
Ny fonon'ilay boky natonta fanindroany “Vučić i cenzura” (Vučić sy ny sivana )  tao amin'ny bilaogin'ny mpanoratra, Srđan Škoro. Avy amin'i Corax ilay sariitatra ao ambadika. Nahazoana alàlana.
Tamin'ny 21 Febroary, voasivana ny toerana misy ny lahatsoratra fahatsiarovana ilay mpanakanto mpanao sary tao amin'ny gazety serbiana iray. Voalaza fa boky momba ny sivana no iray amin'ny faran'ny asasoratra nataony.
Mafy ny fanamelohan'ny  Fikambanan'ny mpanao gazety tsy miankina any Serbia (NUNS) ilay sivana momba ny lahatsoratra fahatsiarovana ilay talen-dry zareo vao maty vao haingana, Darko Novaković (1949 – 2018) tao amin'ilay gazety mpiseho isan'andro Politika.
Nesorin'ny Politika ilay ampahany tao amin'ilay fahatsiarovana ny maty izay nilaza hoe “ny iray amin'ireo boky farany nosoratany dia mitondra ny lohateny hoe ‘Vučić and Censorship,’  ( Vučić sy ny sivana ) ary nanana risim-po i Dako nametraka ny fanampin'anarany sy ny anarany teo amin'ny asany.”
Ny lahatsoratra fahatsiarovana ny maty sy ilay boky tsy azo lavina momba ny filoha Serba Aleksandar Vučić  dia nosoratan'i Srđan Škoro, naman'i Novaković. Ho setrin'ilay sivana dia hoy i Srđan Škoro :
Tsy hitako izay lazaina, marina. Rehefa eken'ny governemanta ny sivana, izay, raha ny marina dia voararan'ny lalàna, dia azo atao ny manivana ny lohatenina boky ao amin'ny lahatsoratra fahatsiarovana ny maty miaraka amin'ny veloma farany atao amin'ny namana iray.
Navoakan'i zanakalahin'i Novaković tao amin'ny tranonkalany ilay lahatsoratra fenon'ilay fahatsiarovana ny maty ary nozarainy tao amin'ny Twitter ny rohy sy ny sarin'ny rainy.
Ho fahatsiarovana – Darko Novaković
Tao amin'ny fanehoan-keviny, nilaza ny fikambanan'ny mpanao gazety tsy miankina fa tohina, na dia efa “fahazarana ho azy ireo aza ny ohatra fanaovana sivana mangingina sy sivantena haingana…” tato anatin'ny taona vitsivitsy. “Tsy mbola nisy nahalala ny politikan'ny ‘fanontana’ lahatsoratra fahatsiarovana ny maty tahaka izany eny fa na ireo mpikambana ambony aza. “
Nampitahain'ilay mpisera amin'ny haino aman-jery iray, izay nanaparitaka ilay rohy misy ilay fanambaràna, amin'ny zava-misy any Serbia amin'izao fotana izao eo ambany fifehezan'ny Antoko Liam-pandrosoana Serba,  ny famoretana izay nisy tamin'ny fitondran'ny Antoko Kaominista tany Yogoslavia , notarihin'i Josip Broz Tito .
Nanomboka nanivana ny Liam-pandrosoana eny fa hatramin'ny lahatsoratra fahatsiarovana ny maty aza. Zavatra izay mbola tsy nitranga mihitsy nandritra ny fitondran'i Broz.
Melohin'ny NUNS ny sivana natao tamin'ny lahatsoratra fahatsiarovana ny maty tao amin'ny Politika.
Ny Vondrona Eoropeana & izao tontolo izao afaka : “Inona no vaovao any Serbia ?”
Serbia: “Sivana atao amin'ny lahatsoratra fahatsiarovana ny maty.”
Vondrona Eorpeana: “?!”
Serbia: “Mbola tsy nahita na inona na inona ianareo.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/22/115500/
 boky natonta fanindroany “Vučić i cenzura” (Vučić sy ny sivana ): https://srdjanskoro.wordpress.com/2016/10/23/vucic-i-cenzura-na-sajmu-knjiga/
 Corax : https://en.wikipedia.org/wiki/Predrag_Koraksi%C4%87_Corax
 Mafy ny fanamelohan'ny: http://nuns.rs/info/statements/34722/nuns-osudjuje-cenzurisanje-in-memoriam-a-u-politici.html
 lahatsoratra fenon'ilay fahatsiarovana ny maty : http://www.rastko.co.uk/darko/
 Antoko Liam-pandrosoana Serba,: https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_Progressive_Party
 Antoko Kaominista tany Yogoslavia: https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Communists_of_Yugoslavia